FMI City အဆင့်မြင့်အိမ်ရာအတွင်း လုံးချင်းအရောင်း
4,962 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact Aung Khaing Khant Co.,Ltd.
Ad Number S-10162497
လှိုင်သာယာ၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံအနီးရှိ #အုတ်တံတိုင်းခြံဝန်းခတ်ပြီး (17ပေ x 35ပေ) နှစ်ထပ်...
Ad Number S-10160770
Ad Number S-10158351
🙏 လှိုင်သာယာစက်မူ့ဇုန်🙏 မြေနှင့်ဂိုဒေါင်ရောင်းမည်။
🔶 မြေအကျယ်-4ဧက 🔶 မြေဖို့အုတ်ခတ် 🔶 နေရာကော...
Ad Number S-10155706
FMI city. 10200 sqft 1Rc မြေကွက်ကျယ်အရောင်း
Ad Number S-10176552
လှိုင်သာယာ လှိုင်မြစ်လမ်းနောက်ကျောမှ ၂ ထပ်ခွဲ လုံးချင်း
970 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10176078
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ ပေါ်တွင် နေရာကောင်း တန်သောဈေးနုန်းဖြင့်...
Ad Number S-10172263
Hlaing Tharyar Industry Zone ( For Sale )
99,999,999,999,999,991,611,392.00 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10171872
Ad Number S-10171839
Ad Number S-10165978
Ad Number S-10165851
လှုိင်သာယာ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာ ပတ်လမ်းမပေါ် ထောင့်ကွက် Lake View ​မြေကွက်...
1.10 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-10164499